Garden - İngilizce - Xhosa Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: garden (İngilizce - Xhosa)
Garden CityCity name (optional, probably does not need a translation)
Garden GroveCity name (optional, probably does not need a translation)
It is upright in the garden
Ukuthi ncotho egadeni
Regular patterns resembling a classical garden
Uluhlaza phambi kwelanga, Namagatya akhe ayaqabela eludongeni lwentsimi yakhe;
UYehova uThixo wamthabatha umntu, wambeka emyezweni we-Eden, ukuba awusebenze, awugcine.
Ngumyezo obiyelweyo udade wethu, umtshakazi; Ngumgogogo ovaliweyo, liliso lomthombo elitywiniweyo.
uYehova uThixo wamndulula emyezweni we-Eden, ukuba asebenze umhlaba abethatyathwe kuwo.
Wangcwatyelwa engcwabeni lakhe, emyezweni kaUza. UYosiya, unyana wakhe, waba ngukumkani esikhundleni sakhe.
UYehova uThixo wamwisela umthetho umntu, esithi, Yonke imithi yomyezo ungayidla uyidle;
Isele ke intombi enguZiyon, njengexhobongo esidiliyeni, njengephempe entsimini yemixoxozi, njengomzi ongqingiweyo.
Intanda yam ihle yaya emyezweni wayo, emityinweni yetyeleba, Ukuba yalusele emyezweni, ukuba ikhe iinyibiba.
Kwaphuma umlambo e-Eden wokuwunyakamisa umyezo; wahluka apho, waba ziimbaxa ezine.
science exhibition (İngilizce>Hintçe)förgänglig (İsveççe>Svahili)inszenierten (Almanca>Japonca)ungoy (Tagalogca>İngilizce)kenangan terindah yang tercipta (Malayca>İngilizce)arandanos (İspanyolca>İtalyanca)borgmester (Portekizce>İngilizce)nimenselvennyt (Fince>İngilizce)une bonne réflexion s’impose (Fransızca>İtalyanca)gui đi (Vietnamca>Hintçe)fornicatio (Latince>İspanyolca)fabergé (İngilizce>Sırpça)yazılmasın (Azerice>Arapça)il concerto come e'stato bello (İtalyanca>İngilizce)activitieswithin (İngilizce>Yunanca)matalimahin (Tagalogca>Tayca)enso (İngilizce>Hollandaca)schoonmaakten (Hollandaca>İngilizce)hamahona (Maori>Almanca)almocei agora (Portekizce>İngilizce)mulye ng sasakyan (Tagalogca>İngilizce)bina ayat seronok (Malayca>İngilizce)utilizziamola (İtalyanca>İngilizce)condit (Latince>İngilizce)bonjours je m'app (Fransızca>İspanyolca)